လွယ်လွယ်ကူကူ Windows 10 Activator For All Version - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Activator Computer software လွယ်လွယ်ကူကူ Windows 10 Activator For All Version
လွယ်လွယ်ကူကူ Windows 10 Activator For All Version
Maung Pauk at 12:01:00 AM Activator, Computer software,
Windows 10 Activator For All Version
ဘယ် Windows 10 ကို မဆို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ Activate လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. လွယ်လွယ်လေးပါ.. အောက်က စာသားတွေကို ကူး.. Notepad ထဲကိုထည့်.. Save လုပ်တဲ့အခါ ဖိုင်နာမည်ရဲ့အဆုံးမှာ .bat လို့ရိုက်ထည့်ပြီး သိမ်းလိုက်.. ရလာတဲ့ bat ဖိုင်ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run.. Enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်.. ပြီးသွားတဲ့အခါ Y/N ကိုရွေးခိုင်းလိမ့်မယ်.. ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေ Y ကိုနှိပ်ပေးလိုက်.. ခဏနေ Reboot ကျသွားလိမ့်မယ်.. ပြန်တက်လာရင် Activate ဖြစ်ပြီ.. လက်တွေ့...
ဘယျ Windows 10 ကို မဆို လှယျလှယျကူကူပဲ Activate လုပျပေးနိုငျပါတယျ.. လှယျလှယျလေးပါ.. အောကျက စာသားတှကေို ကူး.. Notepad ထဲကိုထညျ့.. Save လုပျတဲ့အခါ ဖိုငျနာမညျရဲ့အဆုံးမှာ .bat လို့ရိုကျထညျ့ပွီး သိမျးလိုကျ.. ရလာတဲ့ bat ဖိုငျကို ညာကလဈထောကျပွီး Run as administrator နဲ့ Run.. Enter တဈခကျြခေါကျလိုကျ.. ပွီးသှားတဲ့အခါ Y/N ကိုရှေးခိုငျးလိမျ့မယျ.. ကီးဘုတျပျေါကနေ Y ကိုနှိပျပေးလိုကျ.. ခဏနေ Reboot ကသြှားလိမျ့မယျ.. ပွနျတကျလာရငျ Activate ဖွဈပွီ.. လကျတှေ့...
cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My Blog: http://maungpauk.org&echo.&echo #Credit to :msguides&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel2exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer "http://maungpauk.org"&goto halt
ဒါမှမဟုတ် လုပ်ပြီးသား bat ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီးရလာတဲ့ Activator.bat ဖိုင်ကို Right Click နှိပ်.. Run as administrator ကိုနှိပ်.. နောက်ဆုံး Y ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင် ပြေပါပြီ...
ဒါမှမဟုတျ လုပျပွီးသား bat ဖိုငျကိုဒေါငျးပွီးရလာတဲ့ Activator.bat ဖိုငျကို Right Click နှိပျ.. Run as administrator ကိုနှိပျ.. နောကျဆုံး Y ကိုနှိပျပေးလိုကျရငျ အဆငျ ပွပေါပွီ...
Unknown July 20, 2017 at 11:25 PM
It is very simple and easy to activate win10
MIUI9Theme With MM Font
Microsoft .Net Framework 4.7 Offline Installer
Windows 10 Creators iso Download
ခင်ခင်ထူး စာအုပ် (၁၅) အုပ်
OMH Mi BL Unlocker Beta
Flash အထောက်အပံ့ကို ၂၀၂၀ တွင် Adobe ရပ်ဆိုင်းမည်
Unlocker - FRP/Mi Account Remover
All Samsung Schematics Diagram Collection 2017
Mi Account Unlock Error Fix Tool
XIAOMI REDMI NOTE 4G 2014912 မှာ Wifi နဲ့ Bluetoot...
Xiaomi Mi5c တွေမှာ 4G LTE ရအောင်လုပ်နည်း
Xiaomi China Stable Rom ကနေ Global Stable Rom ချိန...
Huawei Noti Theme Fixer
ကွန်ပျူတာ နှင့် တက်ဘလက်သုံး စားသောက်ဆိုင်သုံး ကွန်...
ဖုန်းဆားဗစ်သမားတွေအတွက် Function စုံ Jurassic Univ...
Miracle Box Ver 2.52 Released Update
OMH Driver Installer V2
Qualcomm Smartphone တွေ Firmware တင်ဖို့ Qualcomm ...
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး သစ်တော မြို့တော် တည်ဆောက်နေတဲ့ တရုတ်
Google ရဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့မှာ Pl...